Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ & ပေးသွင်း - စက်ရုံ
Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (7207-92-3)
အောက်တိုဘာလ 23, 2018
Nandrolone Propionate အမှုန့်ဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်အာဏာအရှိဆုံးဟို-အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာပိုပြီးကြွက်သားထုထည်နဲ့သကျလုံတိုးမြှင့်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်-လက်သမားတို့နှင့်အားကစားသမားများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (7207-92-3) ကဗီဒီယို
Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (7207-92-3) ဖျေါပွခကျြ
Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းလူကြိုက်အများဆုံးထိုးဆေး steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာလူကြိုက်များမှုကြောင့် Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအနည်းငယ်မျှသာအန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူအရေးပါသောဟိုသက်ရောက်မှုထားပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖွယ်ရှိသည်ပါပဲ။ Nandrolone Propionate, အရည်အသွေးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ထိရောက်သောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကြာရှည်ကြွက်သားအကျိုးအမြတ်, ဒီအကြောင်းမှာ (8 ရက်ပေါင်းန်းကျင်) သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အတော်လေးရှည်လျားဝက်ဘဝသည်။
အရိုးကျိုးခြင်းနှင့်အရိုးပွရောဂါငြိမ်းစေလျက်မတိုင်မီ-ပြီးနောက်ခွဲစိတ် Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းလည်း inoperable ရင်သားကင်ဆာများအတွက်အလုပ်မဖြစ်သားအိမ်သွေးထွက်သားအိမ် fibroids etc.Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းလည်းကုသမှုများအတွက်ညွှန်ပြနေသည်, အရွယ်မတိုင်မီနှင့်သားသမီးတို့အဘို့လှီ, နာတာရှည်စားသုံးရောဂါ, ပြင်းထန်သောမီးလောင်, အသုံးပြုသည် သွေးအားနည်းရောဂါရဲ့ရင်သားကင်ဆာ, မျိုးရိုးလိုက် angioedema, antithrombin III ကိုချို့တဲ့, fibrinogen ပိုလျှံ, ကြီးထွားမှုပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် Turner ရဲ့ syndrome ရောဂါနှင့်မျိုးရိုးလိုက် angioedema ၏ prophylaxis ၏။
Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (7207-92-3) Specifications
ထုတ်ကုန်အမည် Nandrolone propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း
ဓာတုအမည် 17-PROPIONATE; NANDROLONE 17-PROPIONATE;4-ESTREN-17BETA-OL-3-ONE 17-PROPIONATE;4-ESTREN-17-BETA-OL-3-ONE PROPIONATE;17-beta-hydroxyestr-4-en-3-one 17-propionate;19-NORTESTOSTERONE 17-PROPIONATE;19-NORTESTOSTERONE PROPIONATE
အမှတ်တံဆိပ် NAmE Anabolicus မ-ဟို, Nortesto, Norybol-19, Pondus, Testobolin
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား အန်ဒရိုဂျင်; ဟို Steroid တစ်မျိုး; အန်ဒရိုဂျင် Ester; Progestogen
CAS အရေအတွက် 7207-92-3
InChIKey RLGRKCTFWUWAKON-RRFJAZBJSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C21H30O3
မော်လီကျူး Wရှစ် 330.46
အရည်ပျော် Point 55-60 °
ရေဆူမှတ် 453.6 mmHg မှာကို C ° 760
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ 8 ရက်ပေါင်းန်းကျင်
Storage Temperature ROOM တွင်အပူချိန်
Application အရိုးကျိုးခြင်းနှင့်အရိုးပွရောဂါငြိမ်းစေလျက်မတိုင်မီ-ပြီးနောက်ခွဲစိတ် Nandrolone propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းလည်းစသည်တို့ကိုသားအိမ် fibroids သွေးထွက် inoperable ရင်သားကင်ဆာအလုပ်မဖြစ်သားအိမ်အဘို့, အချိန်မတန်မီနှင့်သားသမီးတို့အဘို့လှီ, နာတာရှည်စားသုံးရောဂါ, ပြင်းထန်သောမီးလောင်, အသုံးပြုသည်
Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (7207-92-3) ကဘာလဲ?
Nandro Nandrolone Propionate ရေတွင်းထဲကတစ်ခုစွမ်းအင်နှင့်လုံတိုးမြှင့်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်-လက်သမားတို့နှင့်အားကစားသမားအသုံးပြုသောဟိုစတီရွိုက်ကိုသိသည်။ အားကစားသမားတစ်ဦးကအများကြီးပိုကြွက်သားထုထည်နှင့်ခွန်အားရရန်ဤ Steroid တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုပါ။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုးထိုးဆေးပုံစံအတွက်အများအားဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာ a19-မဟုတ်သလိုဟိုအန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ testosterone ဟော်မုန်းဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုရောက်စေဖို့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာ သာ. ကွီးမွတျဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုပေမယ့်ပြောင်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ testosterone ဟော်မုန်းအနကျအဓိပ်ပါယျတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြား steroids DTH လျှော့ချနေချိန်မှာဒီ Steroid တစ်မျိုး DHN လျော့ကျစေပါတယ်အဖြစ်ဒါဟာတဲ့လူသုံးအများဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (7207-92-3) အကျင့်ကိုကျင့်
Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (7207-92-3) Nandro (Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်း) ကိုသုံးမယ့်လူကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးခြုံငုံ Steroid တစ်မျိုးအများဆုံးတစ်ပတ်ကိုလေးလုံးမှငါးကြိမ်ထိုးသွင်းနေသည်အများအပြားအားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဤငွေပမာဏနှင့်အတူအီစရိုဂျင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင် gyno အဘယ်သူမျှမပြဿနာပင်ဖြစ်သည်အနည်းငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကာယဗလအဘို့, Nandro (Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်း) ကိုထိရောက်စွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် cycles.It ဖြတ်တောက်အသည်းအပေါ်လွယ်ကူသည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီလျှော့ချနေချိန်မှာကောင်းသောအရွယ်အစားနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုအကျိုးအမြတ်ကိုအားပေးအားမြှောက်နိုင်ပါတယ်။
Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (7207-92-3) သောက်သုံးသော
Nandrolone Propionate တစ်ခုထိုးဆေးပုံစံကိုတွေ့ရပါသည်။ အဲဒါကိုရောထွေးရတက်ကြွဖြစ်လာဖို့ပြောင်အချိန်ယူဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာထောက်လှမ်းဘို့2ရက်သတ္တပတ်မှ3ခန့်ကြာ။ ဒါကြောင့်ကြိုတင်မူးယစ်ဆေးဝါးထောက်လှမ်းစမ်းသပ်ရာအရပျယူနိုငျဘယ်မှာမဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုသို့မဟုတ်ပွဲစဉ်မှသုံးပတ် twoto Nandrolone Propionate စီမံခန့်ခွဲရပ်တန့်ဖို့အကြံပြုထားသည်။ ကုထုံးလိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းကြောင့်သွေးအားနည်းရောဂါနှင့်အခြားရောဂါများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်တစ်ပတ်ကို 100mg မှ 200 အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တချို့ကအားကစားသမားပင်ပိုကောင်းရလဒ်များအတွက်တစ်ပတ်လျှင် 300mg မှ 400 အကြောင်းကိုကိုအသုံးပြုပါ။
Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (7207-92-3) အမှုန့်ကိုအသုံးပြုခြင်း
Nandrolone Propionate စွမ်းအင်နှင့်လုံတိုးမြှင့်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်-လက်သမားတို့နှင့်အားကစားသမားများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအစသွေးအားနည်းရောဂါရဲ့ရင်သားကင်ဆာ, မျိုးရိုးလိုက် angioedema, antithrombin III ကိုချို့တဲ့, fibrinogen ပိုလျှံ, ကြီးထွားမှုပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်မျိုးရိုးလိုက် angioedema ၏ Turner ရဲ့ syndrome ရောဂါနှင့် prophylaxis ၏ကုသမှုများအတွက်ညွှန်ပြနေသည်။
Buyaas.com ထံမှ Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (7207-92-3) Buy
1 ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် cGMP အောက်မှာထုတ်လုပ်နေကြပြီးနှင့်အရည်အသွေးခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။
2 ။ အဆိုပါသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းမရှိလျော့နည်း 98 ထက်% အာမခံနေကြသည်။ COA; HPLC; HNMR စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများပေးနိုင်ပါသည်။
3 ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်ကအရမ်းတည်ငြိမ်သည်နှင့်မှန်မှန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်စာရင်း။
4 ။ ကျနော်တို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် High-end စျေးကွက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကြွယ်ဝအတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။
5 ။ တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်, သင်သည်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Nandrolone Cypionate ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (601-63-8)
ကုန်ကြမ်း Mestanolone အမှုန့် (521-11-9)
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Undecanoate အမှုန့် (862-89-5)
ကုန်ကြမ်း Trestolone Acetate (MENT) အမှုန့် (6157-87-5)
2008 တှငျတှေ့ Hengfei ဇီဝဗေဒ, ထုတ်လုပ်ခြင်း, R & D နှင့်အရောင်းပေါင်းစပ်များအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆေးဝါးထဲကဓာတုပစ်စညျးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းအဘို့အ Trestolone Acetate (MENT) မှအဆိုပါ Ultimate လမ်းညွှန်
သင်က Tadalafil အကြောင်းသိထားသင့်အရာအားလုံးကို
testosterone phenylpropionate: တစ်ကာယဗလမယ်ကိုသိရန်လိုအပ်နေသောအရာအားလုံး